चीन गार्डन उपकरण फूल र्याक फूल घर निर्माता र आपूर्तिकर्ता रुईआई
चाहे तपाईं एक अनुभवी माली हो वा केवल बढिरहेको कलियों, यो बगैंचाको ओछ्यान किट तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
बोट संरक्षण र पोषण: ग्रीनहाउस गिरावटले न्यानो र पौष्टिक वातावरण प्रदान गरेर बोट उत्पादन बढाउन सक्छ। यसले चरम मौसमको प्रभावलाई पनि रोक्छ, तपाईंलाई बिरुवा बढ्न अनुमति दिँदछ जुन तपाईंको क्षेत्रमा राम्रोसँग बढ्दैन। तपाईं जाडोमा वर्षभरि फलफूल र तरकारीहरू छान्न सक्नुहुन्छ।
खाली, मुद्रांकन, झुकने, झुकाउने, वेल्डिंग, चमकाने, स्यान्डब्लास्टि,, स्प्रेि,, निरीक्षण, असेंबली, प्याकेजि,, समाप्त उत्पादन
बोट संरक्षण र पोषण: हरितगृह गिरावट एक गर्मी र पौष्टिक वातावरण प्रदान गरेर बोट उत्पादन बढाउन सक्छ। यसले चरम मौसमको प्रभावलाई पनि रोक्छ, तपाईंलाई बिरुवा बढ्न अनुमति दिँदछ जुन तपाईंको क्षेत्रमा राम्रोसँग बढ्दैन। तपाईं जाडोमा वर्षभरि फलफूल र तरकारीहरू छान्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक बगैंचा उत्साहीका लागि उपयुक्त:चाहे तपाईं एक अनुभवी माली हो वा केवल बढिरहेको कलियों, यो बगैंचाको ओछ्यान किट तपाईंको लागि उपयुक्त छ। फूलको भाँडो बक्सले जडिबुटी, तरकारी र बोटबिरुवा रोपण सरल र तनावमुक्त बनाउँछ। कम रखरखाव, न्यानोपन र चिस्यान, र कीराहरू र जनावरहरूमा रमाउन ग्रीन हाउस प्रयोग गर्नुहोस्।
भेला गर्न सजिलो:सजिलै असेंब्लीको लागि प्लास्टिक कनेक्टरहरूको साथ उच्च-गुणवत्ता, रस्ट-प्रुफ, पाउडर-लेपित, जस्ती इस्पात बगैंचाको ओछ्यान। टिकाऊ उच्च-गुणवत्ता पीई ग्रीनहाउस कभर पनि चाँडै इस्पात फ्रेममा स्थापना गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ माथि र तल सुरक्षा धारहरू छन्। ग्रीन हाउस कभर सजिलैसँग संलग्न भण्डारण ब्यागमा भण्डारण गर्न सकिन्छ जब प्रयोगमा छैन।
पैसा बचत गर्नुहोस्: जडिबुटी र कृषि उत्पादनहरूको बढ्दो लागतले स्वस्थ खानालाई महँगो विकल्प बनाउँदछ। तर यो आवश्यक छैन। तपाईंको आफ्नै खाना बढाउनु तपाईंको शरीर र दिमागका लागि मात्र राम्रो छ, तर तपाईंको वालेटको लागि पनि। प्रत्येक वर्ष तपाईं आफ्नो मनपर्ने फलहरू, तरकारीहरू र जडिबुटीहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम थोरै रोपण लागतको साथ!
विस्तृत संरक्षण ：पोर्टेबल ग्रीनहाउस तपाईको बोटबिरुवा र बिउराउन, वर्षा, हावा र हिउँ जस्तो नराम्रो मौसम स्थितिको बिरूद्ध सुरक्षाको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले तपाईंको बोटबिरुवा स्वास्थ्य विकासको लागि उत्तम वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ र तपाईंको बढ्दो मौसम विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ!
पर्यावरण-मैत्री PE सामग्री: हामी वातावरण-मैत्री गाढा Polyethylene (PE) प्रयोग गर्दछौं। EP ईथिलीन पोलिमराइज्डबाट बनेको एक प्रकारको थर्मोप्लास्टिक राल हो, जुन गन्ध रहित, गैर-विषाक्त छ, र उत्कृष्ट कम-तापमान प्रतिरोध, राम्रो रासायनिक स्थिरता, र राम्रो एसिड र क्षार क्षति प्रतिरोधको छ। ।
कडा संरचना:हरितगृहले हावाबाट स्थिरता र आश्रय बोटबिरुवाहरू राख्नको लागि उच्च गुणवत्ताको ट्यूबलर स्टील पाइपलाई ग्रहण गर्दछ। साथै, एक भारी समर्थन नेट अधिक बिउ ट्रे, बोटेको बोट र बिरूवा वृद्धि को लागी अन्य प्रकाश वस्तुहरु लाई पकड गर्न पर्याप्त फर्म छ।
प्रकार बगैचा ग्रीनहाउसहरू
ब्रान्ड नाम QLYD
फ्रेम समाप्त गर्दै पाउडर लेपित
फिचर सजीलै जम्मा गरियो, इको फ्रन्डल्ट, रोडेन्ट प्रूफ, पोर्टा
सामग्री पाली बुनेको कपडा
MQQ १०० पीसी
मोडेल नम्बर OEM
धातुको प्रकार इस्पात
दवाव उपचार गरियो प्रकृति
नाम बगैचा पोर्टेबल * * * * २ २ मीटर टनेल पोल कन्सर्वेटरी
एप्लिकेसन बढेको बोटबिरुवाहरू र सबै मौसमहरूमा शाकाहारीहरू
अनुकूलन अर्डर स्वीकार्नुहोस्
समय छुटकारा 30 दिन
र एक पठाउनुहोस् ईमेल लाई বিক্রয়@ruiyitools.com
यस वस्तुको समीक्षा गर्नका लागि अर्को ग्राहक हुनुहोस्।
उत्पत्तिको गति शेन्डोंग, चीन
अघिल्लो: बीच कार र्याम्प
अर्को: आउटडोर मनोरन्जन वाहन
कंक्रीट मिक्सर ट्रक, चीन पु फोम व्हील, पु व्हील, China PU Wheel, कास्टर व्हील, चीन कंक्रीट मिक्सर,